विश्वका विभिन्न देशहरुमा सत्तापलट र सत्ता अस्थिरताका घटना भईनै रहेका छन् । सिरीयादेखि अफगानिस्तान, क्रिमियादेखि बर्मा, भुटानदेखि कतारसम्म नाकाबन्दी, मानवअधिकार हनन्, सत्ता हस्तान्तरणमा अवरोध जस्ता घटना घटिरहेकै छन् । त्यसकै नाममा विश्व शक्तिराष्ट्रको चासोले विभाजित राजनीतिक शक्ति र तिनीहरुबीचको शक्ति संघर्ष र त्यसका प्रभावहरु अन्य देशहरुमा पनि परिरहेकै छन् ।
केहि हप्ता अगाडिसम्म जनमानसमा खासै नाम नसुनिएको भेनेजुयला अहिले नेपालमा एकाएक चर्चामा आएको छ । गुगलमा नेपालीले भेनेजुयलाको खोजी गर्ने ट्रेन्ड पनि यो हप्ता ह्वात्तै बढेको देखाएको छ तथ्यांकहरुले ।
कुनै पनि स्तरमा सरकारी सम्बन्ध नभएको करिब १४ हजार किलोमिटर परको दक्षिण अमेरिकी मुलुकबारे नेपालमा चर्चा चुलिनु संसारकै लागि रोचक प्रसंग हुन सक्छ । यसका पछाडि त्यहाँ भएको सत्तासंकटमा नेपालको सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले निकालेको विज्ञप्ति र त्यसका पक्षविपक्षमा पार्टीभित्र बाहिरबाट आएका प्रतिक्रियाले पनि नेपालमा भेनेजुयलाको चासोलाई अझ रुचिकर बनाइरहेको छ । पछिल्लो समय त नेकपाका अध्यक्षद्वय नै यसबारेमा सार्वजनिक मञ्चबाट विवाद गरिरहेका छन् ।
कुटनीतिक शब्दको सट्टा राजनीतिक शब्द चयन गर्दै जनयुद्धकालको झल्को दिनेगरी प्रचण्डले अमेरिकि साम्राज्यवादको नामै किटेर भेनेजुयलामा भएको सत्तासंकटमाथि अमेरिकाको आलोचना गर्दै जब वक्तव्य निकाले त्यसको सामाजिक सञ्जालदेखि अनलाइनहरुमा समेत त्यसको पक्ष विपक्षमा धारणा आउन थाले । वामपन्थी मत राख्ने तथा प्रचण्डको वक्तव्यलाई सर्मथन गर्नेहरुले प्रचण्डले साम्राज्यवादलाई चुनौति दिन सकेको भन्दै सर्मथन गरे भने अन्यले नचाहिने र अनावश्यक सवालमा प्रचण्डले उत्ताउलिएर वित्तप्ति जारी गरेको ठाने ।
हाम्रोमा एकाएक आए पनि भेनेजुयलाको राजनीतिक तनाव र संघर्ष धेरै अगाडिदेखिको हो । अहिले आम मान्छेको चासो बढ्नु तथा शक्तिराष्ट्रको चासोले दुई सत्ताको विभाजन कोरेको चाहिँ भेनेजुयलामा ३५ वर्षे विपक्षी नेता तथा भेनेजुयलाका संसदका अध्यक्ष हृ्वान गुइदोले सडकबाटै आपूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि हो ।
उनले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेलगत्तै अमेरिका क्यानडासहितका केहि राष्ट्रले गुइदोलाई सर्मथन गर्दै उनको पक्षमा उभिए । यो आलेख तयार पार्ने बेलासम्म उनको पक्षमा उभिनेहरुमा अमेरीका र क्यानडा मात्र नभएर अन्य राष्ट्रहरु युरोपियन यूनियनका सबै देशहरु (इटाली बाहेक) तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली कोलम्बिया, कोस्टारिका, पानामा र पेरुले समेत रहेका छन् । त्यसले त्यहाँका राष्ट्रपति मदुरोको सरकारलाई थप दवाव बढाएको छ । यति नै बेला चीन, रसिया, टर्की, भारत, कोरिया लगायतका अन्य देशका सरकारले वर्तमान राष्ट्रपति मदुरोकै पक्षमा भएको विज्ञप्ति जारी गरका छन् । यसबाट प्रष्ट देखिने गरी सत्तासंकट र दुई सरकारको अवस्था देखिएको छ भेनेजुयलामा ।
स्पेनबाट १८११ र कोलम्बियाबाट १८३० मा स्वतन्त्र भएको दक्षिण अमेरिकी राज्य भेनेजुयला करिब ९ लाख १६ हजार चारसय ४५ वर्गकिमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उत्तरमा क्यारेबियन सागर, दक्षिणमा एटलान्टिक महासागर, पश्चिममा कोलम्बिया र ब्राजिलको बीचमा बोलिभिरीयन गणराज्य भेनेजुयला रहेको छ । मुख्य भाषा स्पेनिससहित २६ अन्य भाषाहरु बोलिने यो देश विश्वमा सबैभन्दा धेरै कच्चा तेल भएको मुलुक हो । क्याथोलिक र प्राटेस्टेन्ट ईसाइहरुको मुख्य बसोबास रहेको यो मुलुकमा करिब ३ करोड ४० लाख हाराहारीको जनसंख्या रहेको छ ।
निकै लामो सैनिक शासन बेहोरेको यो मुलुकमा सन् १९९९ मा संविधान बनिसकेपछिको निवार्चनमा लगातार समाजवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने ह्यूगो चाभेजले निर्वाचन जितेका थिए । २०१३ मा क्यान्सरका कारण उनको निधन भएपछि मदुरो उनको उत्तराधिकारीको रुपमा सत्ता सम्हाल्न आएका थिए ।
कच्चा तेलको मूल्यमा आएको विश्वव्यापी गिरावट र उनको कमजोर शासकीय क्षमता तथा राजनीतिक खिचातानीले केहि अगाडिसम्म सम्पन्न रहेको भेनेजुयला कमजोर तथा कंगाल मुलुक बनेको छ ।
तेलमा आएको विश्वव्यापी गिरावटले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई सचेत गराइरहेकै थियो । त्यसबीचमै ह्युगो चाभेजको निधन र त्यसपछि सत्ता सम्हालेका निकोलस मदुरोको आगमनसँगै मुलुकले नयाँ नयाँ संकट बेहोर्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्र करिब ९६ प्रतिशत हिस्सा तेलमा आधारित उद्योग रहेको त्यहाँ विश्वव्यापी तेलको गिरावटले त्यसलाई कमजोर त बनाएकै थियो । त्यसमाथि धेरैजसो उद्योगहरु राष्ट्रियकरण भएकोले अर्थतन्त्रमाथि मडारिएको त्यो बादल हटाउन मदुरो असफल रहे । राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर रहेको बेलामा उनले थप समाजवादी कार्यक्रम घोषणा गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप नकरात्मक बनायो ।
अझ भष्ट्राचार, अनियमितता तथा संस्थागत क्षमता ह्रास भएको कारणले उनी थप अलोकप्रिय बनेका थिए । राजनीतिक विवाद र आर्थिक संकटले जकडिएकाले उनी तथा उनको दलको अलोकप्रियतालाई थप बढाएर लग्यो । २०१५ को संसदको चुनावमा विपक्षीहरु विजय भए ,जसले राष्ट्रपति र संसदको बीचमा ‘डेडलक’को अवस्था सृजना गरयो ।
यसको बीचमा उनले संविधानसभाको नाममा नयाँ संरचनाको खडा गरे, जसले संसदको समानान्तर रुपले काम गर्न थाल्यो र विस्तारै विपक्षी बलियो भएको संसदलाई सेरेमोनियल बनायो । यो यतिमा मात्र सीमित भएन । मदुरोले समय अगावै राष्ट्रपतिको निवार्चन गराए र आफु पुनः राष्ट्रपतिमा निवार्चित भए ।
मुख्य विपक्षी दल तथा त्यसका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेर निर्वाचन गरेका कारण त्यो निवार्चनलाई दि अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेटसले अवैधानिक घोषणा गर्‍यो । यसलाई अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशहरुले मान्यता दिएनन् ।
शक्ति संघर्ष चर्कंदै जाँदा भेनेजुयलाको राष्ट्रिय संसदका अध्यक्ष गुएइदोले आफूलाई सडकबाटै अन्तरिम राष्ट्रपतिको रुपमा घोषणा गरे । भेनेजुयलाको राष्ट्रपति पद खाली रहेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले निवार्चन सम्पन्न गर्नलाई आफूले अन्तरिम राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भेनेजुयलामा के भैरहेको छ ?
अहिले भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र कोल्याप्स भएको छ । त्यहाँ आर्थिक र राजनीतिक संकट मात्रै छैन, त्यसमाथि सामाजिक संकट समेत जेलिँदै एकाकार भएर आएको छ ।
सन २०१८ का विभिन्न अर्थतन्त्रका सूचकांकलाई आधार मान्दा भेनेजुयलामा करिब १७ लाख प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ र करिब ८७ प्रतिसत भन्दा धेरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि परिसकेका छन् । यो तथ्यांक सन् २०१५ सम्म करिब १८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । भेनेजुयलाको औसत तौल समेत घटेको छ । अहिले भेनेजुयलाका नागरिकले चरम बेरोजगारीको समस्या व्यहोरिरहेको छ । करिब ३४ प्रतिशत भेनेजुयली बेरोजगार छन् भने बजेट सन्तुलन करिब ४७ प्रतिशतले नकरात्मक छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । हाइपर इन्फ्लासन,अभाव र बेरोजगारी मुख्य समस्याको रुपमा देखिएका छन् ।
एक किलो गोलभेंडा किन्न तथा एक छाक खाना खान करोडौं बोलिभार खर्च भइरहेको छ । जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । औषोधोपचरको राम्रो व्यवस्था छैन । सन २०१५ को संकटदेखि हालसम्म करिब ३० लाख भेनेजुयालीले आफ्नो देश छोडेर छिमेकमा शरण माग्न गइरहेका छन् भने सिरीयामा जन्मेका बच्चाको भन्दा कमजोर स्वास्थ्य भेनेजुयलामा जन्मेका बच्चाको देखिएको छ ।
समग्रमा भेनेजुयला हामीले हिन्दू मिथोलोजीमा सुन्ने गरेको नर्क समान भएको छ र त्यसमाथि राजनीतिक खिचातानी बढ्नुले त्यो अझै लामो हुने देखिएको छ ।
को हुन् सडकबाट राष्ट्रपति घोषणा गर्ने जुआन गुइएदो ?
२८ जुलाई १९८३ मा जन्मेका ३५ वर्षीय गुआइदो पेसाले इन्जीनियर तथा राजनीतिज्ञ हुन् । विद्यार्थी राजनीतिमार्फत् चर्चामा आएका गुइएदो सन् २०१० मा आफैंले पपुलर विल नामको राजनीतिक पार्टी स्थापना गरे । जुन सेन्ट्रिस्ट सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी हो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहेका गुइएदो भेनेजुयलाको भारगास राज्यबाट राष्ट्रिय सभाको लागि निवार्चित भएका थिए । पार्टी निमार्णपछि भोकहड्ताल आन्दोलनबाट चर्चामा आएका गुइएदो भेनेजुयलाको मध्यम वर्गीय परिवारवाट आएका हुन । इन्डस्ट्रियल इन्जीनियरिङमा स्नातक गरेका उनी बिजनेस र सार्वजनिक प्रशासनमा अमेरीकाबाट स्नातकोत्तर समेत गरेका छन् ।